श्रीमान जिम्मेवार नबन्दा बिग्रन सक्छन् श्रीमती, ख्याल गर्नुहोस्
जनतापाटी बुधवार, जेठ २९, २०७६, ११:४३:०० मा प्रकाशित
एजेन्सी । श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु दुई जनाकै भूमीका महत्वपुर्ण हुन्छ । दुईजनाले नै एक अर्कामा विश्वासका साथ अघि बढ्ने हो भने सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ ।
यहाँ हामीले यस्ता केही उपाय उल्लेख गरेका छौं जहाँ श्रीमान र श्रीमतीबीचको मतमुटाव साम्य हुनसक्छ । अनि सुमधुर र आत्मिय सम्बन्ध विस्तार हुनसक्छ । यो तपाईंका लागि पनि उपयोगी छ कि ?
– श्रीमती के गर्दै छिन्, कहाँ जाँदै छिन् किन जाँदै छिन्, को सँग जाँदैछिन् भन्ने जस्ता कुरामा विचार पुर्‍याउनुस् । तपाईंले आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु भन्दैमा अन्धभक्त भएर विश्वास गर्नु पनि ठीक हुँदैन । यसको मतलव धेरै शंका गर्नु पनि राम्रो होइन ।
– सकेसम्म श्रीमतीलाई घरमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी तपाईं वैदेशिक रोजगारी या बाहिर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतीलाई घरपरिवारसँगै राख्नुहोस् ।
– आमाबाबुको सबै कुरा सुन्नुहोस् । किनकी उनीहरुले तपाईं र तपाईंको कुभलो हुने कुरा कहिल्यै बोल्नुहुन्न ।
– तपाईको फोनको श्रीमतीले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्दा उनले तरिकाले बोलेकी छिन् ? बोल्दा बोल्दै एकासी झर्किने, रिसाउने गर्छिन् भने पनि शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न हुन्छ ।
– कहिलेकाहीं श्रीमतीलाई अभावमा पनि बाँच्न सिकाउनुहोस् । तर, त्यसो भन्दैमा धेरै कष्ट भने दिनुहुँदैन । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतीलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने कहिलेकाहीं त्यो पैसा गलत काममा पनि प्रयोग हुन सक्छ ।
– एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा तपाईंकी श्रीमती कतिको चुलबुले छिन् ? यदि चुलबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस्, किन कि महिलाहरु जति चुलबुले हुन्छन त्यतिनै यौनका प्यासी पनि । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले समय दिनुभएन भने जे पनि हुनसक्छ ।
– श्रीमतीलाई समय दिनुहोस् साथि भाइ, कार्यालय, कामकाम मात्र पनि नभन्नुहोस् । तपाईंले श्रीमतीलाई पनि समय दिनु आवश्यक हुन्छ । बिदाको समयमा घुमाउन लैजाने, कहिले काहीं सरप्राइज उपहार दिने काम गर्नुहोस् । जसका कारण श्रीमतीको तपाईं प्रतिको माया झनै गाढा भएर जानेछ ।
राजस्थानद्वारा मुम्बई ४ विकेटले पराजित आइतवार, बैशाख १, २०७६, ०७:०४:००
हास्य कलाकार बने युक्रेनको राष्ट्रपति सोमवार, बैशाख ९, २०७६, १२:०६:००
भालेविरुद्ध मुद्दा हाल्ने नै कारबाहीमा शनिवार, भदौ २१, २०७६, १७:५६:००
सिद्धार्थनगरमा डेंगु सचेतना र सरसफाई (फोटो फिचर)
मिलेर डेंगू नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीकाे आग्रह
सरकार भन्छ – 'डेंगुका कारण आपतकालिन अवस्था घाेषणा गर्नुपर्ने अवस्था छैन'
काठमाडौं खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला